တရုတ်နိုင်ငံ၏ ပြည်ပကုန်သွယ်မှု ပထမလေးလအတွင်း ၇ ဒသမ ၉ ရာခိုင်နှုန်း မြင့်တက် - Xinhua News Agency
တရုတ်နိုင်ငံ ကျန်းဆူးပြည်နယ် နန်ကျင်းမြို့ရှိ နန်ကျင်းဆိပ်ကမ်း၏ Longtan ကွန်တိန်နာဂိတ်အား မေ ၆ ရက်တွင် တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ၏ ပို့ကုန် နှင့် သွင်းကုန် စုစုပေါင်းသည် ၂၀၂၂ ခုနှစ် ပထမလေးလအတွင်း ယွမ် ၁၂ ဒသမ ၅၈ ထရီလီယံအထိ နှစ်အလိုက် ၇ ဒသမ ၉ ရာခိုင်နှုန်း တိုးလာခဲ့ကြောင်း မေ ၉ ရက် တရားဝင်အချက်အလက်များတွင် ဖော်ပြထားသည်။အမေရိကန်ဒေါ်လာအနေဖြင့် စုစုပေါင်း ပြည်ပကုန်သွယ်မှုမှာ လေးလအတွင်း အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁ ဒသမ ၉၈ ထရီလီယံ ရှိပြီး နှစ်အလိုက် ၁၀ ဒသမ ၁ ရာခိုင်နှုန်း မြင့်တက်ခဲ့ကြောင်း အကောက်ခွန်ရုံးအထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ထံမှ သိရသည်။
ဇန်နဝါရီလမှ ဧပြီလအထိကာလအထိ ပို့ကုန်ကဏ္ဍတွင် ယွမ် ၆ ဒသမ ၉၇ ထရီလီယံအထိ နှစ်အလိုက် ၁၀ ဒသမ ၃ ရာခိုင်နှုန်း တိုးပွားလာပြီး သွင်းကုန်ကဏ္ဍတွင် ယွမ် ၅ ဒသမ ၆၁ ထရီလီယံအထိ ၅ ရာခိုင်နှုန်း မြင့်တက်ခဲ့ကြောင်း ၊ ကုန်သွယ်မှုပိုငွေ ယွမ် ၁ ဒသမ ၃၆ ထရီလီယံအထိ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြောင်း အချက်အလက်များတွင် ဖော်ပြထားသည်။
တရုတ်နိုင်ငံ၏ ကုန်သွယ်မှုအတွက် ထိပ်တန်းကုန်သွယ်ဖက်သုံးခုဖြစ်သည့် အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများအသင်း(အာဆီယံ) ၊ ဥရောပသမဂ္ဂ နှင့် အမေရိကန်နိုင်ငံတို့နှင့် တိုးတက်မှုအရှိန်အဟုန်အား ထိန်းသိမ်းထားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဇန်နဝါရီလမှ ဧပြီလအထိကာလအတွင်း အာဆီယံ ၊ ဥရောပသမဂ္ဂ နှင့် အမေရိကန်နိုင်ငံတို့နှင့် တရုတ်နိုင်ငံ၏ ကုန်သွယ်မှုပမာဏ တိုးတက်မှုနှုန်းသည် ၇ ဒသမ ၂ ရာခိုင်နှုန်း ၊ ၆ ဒသမ ၈ ရာခိုင်နှုန်း နှင့် ၈ ဒသမ ၇ ရာခိုင်နှုန်း အသီးသီး ရှိကြောင်း အကောက်ခွန်ရုံးအချက်အလက်များတွင် ဖော်ပြထားသည်။
ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းများသည် ပထမလေးလတာအတွင်း ပို့ကုန် ၊ သွင်းကုန်ကဏ္ဍတွင် ယွမ် ၆ ဒသမ ၁ ထရီလီယံအထိ ၁၁ ရာခိုင်နှုန်း တိုးတက်ပြီး နိုင်ငံ ပို့ကုန်သွင်းကုန်စုစုပေါင်း၏ ၄၈ ဒသမ ၅ ရာခိုင်နှုန်း ရှိသောကြောင့် လျှင်မြန်သောတိုးတက်မှုနှုန်းအား တွေ့မြင်ရသည်ဟု ဆိုသည်။
နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုမ္ပဏီများ နှင့် နိုင်ငံပိုင်လုပ်ငန်းများ၏ ပို့ကုန် နှင့် သွင်းကုန်သည် လေးလအတွင်း ၂ ဒသမ ၂ ရာခိုင်နှုန်း နှင့် ၁၄ ဒသမ ၁ ရာခိုင်နှုန်း အသီးသီး မြင့်တက်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
စက်ပစ္စည်း နှင့် လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာထုတ်ကုန်များ၏ တင်ပို့မှုများမှာ ပထမလေးလအတွင်း စုစုပေါင်း၏ ၅၇ ဒသမ ၉ ရာခိုင်နှုန်း အထိ ရှိလာပြီး ၆ ဒသမ ၇ ရာခိုင်နှုန်း တိုးလာကာ လုပ်သားအခြေပြုထုတ်ကုန်များ တင်ပို့မှုများမှာ ၉ ဒသမ ၂ ရာခိုင်နှုန်း တိုးလာခဲ့ကြောင်း အကောက်ခွန်ရုံးအထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၏ အချက်အလက်များတွင် ဖော်ပြထားသည်။
ဧပြီလ တစ်လတည်းအနေဖြင့် ပို့ကုန်သည် နှစ်အလိုက် ၁ ဒသမ ၉ ရာခိုင်နှုန်း မြင့်တက်ပြီး သွင်းကုန်မှာ ပြီးခဲ့သောနှစ်ကထက် ၂ ရာခိုင်နှုန်း လျော့ကျမှုနှင့်အတူ တရုတ်နိုင်ငံ၏ ပြည်ပကုန်သွယ်မှုပမာဏသည် ယွမ် ၃ ဒသမ ၁၆ ထရီလီယံအထိ နှစ်အလိုက် ၀ ဒသမ ၁ ရာခိုင်နှုန်း ရှိလာခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
2nd LD: China’s foreign trade up 7.9 percent in first four months
China’s trade with its top three trading partners — the Association of Southeast Asian Nations, the European Union and the United States — maintained growth momentum.
Photo – Aerial photo taken on May 6, 2022 showsaview of the Longtan Container Terminal of Nanjing Port in Nanjing, Jiangsu Province. (Xinhua/Li Bo)